ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့စိုပြေစေဖို့ တာဝန်ယူမယ့် The Saem ရဲ့ Urban Eco Harakeke Toner | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့စိုပြေစေဖို့ တာဝန်ယူမယ့် The Saem ရဲ့ Urban Eco Harakeke Toner
အခုတစ်လော facebook မှာ ကောင်မလေးချောချောလေးယောက်ရဲ့ ‘Harakeke~~Harakeke~~’ ‘နူးညံ့ချောမွတ် ချော ချော ချော ချော’ ဆိုပြီးနားအရမ်းစွဲတဲ့ သံစဉ်လေးရယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကကွက်လေးရယ်နဲ့ ကြော်ငြာထားတဲ့ The Saem ရဲ့ Harakeke video လေးကို သတိထားမိကြမှာပါနော်။ The Saem ရဲ့ Global model ဖြစ်တဲ့ SEVENTEEN ကလည်းဒီလို video လေးအရင်ရှိတဲ့အတွက် Carat တွေကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ရင်းနှီးနေမှာပါ။ ဒီ နားထဲစွဲနေတဲ့ Harakeke series လေးထဲကမှ Urban Eco Harakeke Toner လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
#더샘x세븐틴 #하라케케댄스 SNS 사전공개!>.<bbbb #하라케케 #저장저장촘촘촘♪♬ 다함께 댄스파뤼 ? 지난 4/24~26 까지 진행되었던 더샘x세븐틴 하라케케댄스 공유 이벤트의 당첨자를 발표합니다. @gyubi_1219 당첨을 진심으로 축하드리며, 당첨자께는 개별적으로 메시지 드리겠습니다! ※주의사항※ 1. 기한 내에 당첨자 정보를 전달 하지 않을 경우, 당첨이 취소될 수 있습니다. 2. 잘못된 정보로 연락 불가, 경품 반송/분실 될 경우에는 재발송 되지 않으니 양해 부탁 드립니다. . #더샘 #글로벌에코더샘 #thesaem #theSAEM #seventeen #SVT #에스쿱스 #정한 #조슈아 #준 #호시 #원우 #우지 #디에잇 #민규 #도겸 #디노 #버논 #승관 #하라케케춤 #하라케케댄스 #댄싱머신 #춤신춤왕 #광고 #댄스 #춤
A post shared by 글로벌 에코 더샘 (@thesaem.official) on Apr 23, 2018 at 11:02pm PDT
ဒီ Harakeke Toner လေးက နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာပွင့်တဲ့ ဒီ Harakeke ပန်းပွင့်လေးတွေကနေပြုလုပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ Harakeke ပန်းလေးတွေက အသားကိုအေးစေပြီး ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးပါတယ်။ Eco friendly concept ကိုအဓိကထားတဲ့ The Saem ကနေထုတ်တာမို့လို့ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း သဘာဝကရတဲ့ ပန်းတွေ၊ အရွက်တွေဆီကနေပြုလုပ်ထားတာပါ။
တစ်ခြား toner တွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ toner လေးမှာ mineral water အစား Harakeke ကရတဲ့အနှစ်တွေကိုပဲသုံးထားတာကြောင့် ပိုပြီး အသားအရေကိုအေးမြစေသလို ရေဓါတ်ကိုလည်းတစ်ခြား toner တွေထက်ပိုပြီးရရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် liquid type မဟုတ်ဘဲ gel လိုမျိုး type ဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးစိမ့်ဝင်အားကောင်းသလို အဆီပြန်ပြီးပြောင်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးထက် သဘာဝအတိုင်း တင်းတင်းပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေစေမှာပါ။ အနံ့လေးကလည်း သဘာဝသစ်ရွက်တွေရဲ့အနံ့လိုဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေးစူးတာကြောင့် အနံ့စူးစူးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အများကြီးမသုံးမိစေဖို့သတိထားရပါမယ်။
ဒီ Urban Eco Harakeke Toner လေးကိုသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ The Saem ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီး အခုတစ်လလုံးလည်း သီတင်းကျွတ် discount ရှိတယ်လို့ သတင်းကောင်းပေးလိုက်ပြီနော်။
image source : www.instagram.com/thesaem.official/
Tags: articleharakekethe saemToner